Ukusebenza kanzima kunomvuzo njengoba uNdlovu ezinikela ngakho konke | Scrolla Izindaba
Ukusebenza kanzima kunomvuzo njengoba uNdlovu ezinikela ngakho konke
USiphesihle Ndlovu uwubufakazi obuphilayo bokuthi ukusebenza kanzima kunomvuzo.
Lo mdlali wasesiswini weOrlando Pirates wenza ukuba khona kwakhe kuzwakale futhi usevele wahlomula ngemiklomelo emibili yokuba ngumdlali ovelele kule sizini – okuyinto ebikude kakhulu ngesizini edlule ngesikhathi ejoyina amaBhakabhaka esuka kuMaritzburg United kanti umqeqeshi uJosef Zinnbauer wambona njengomuntu odingekayo.
Izinto bezingabonakali kahle kulo mdlali wasesiswini ngesikhathi kuvulwa iwindi lokuthengwa kwabadlali ngoMasingana nyakenye. Ubhekene nokushoda kwesikhathi somdlalo, ubemataniswa nemalimboleko abuyiselwe eqenjini lakhe langaphambilini iMaritzburg United, kodwa iPirates yashaywa amanxeba amaningi nokumiswa okwesikhashana, nokuvimbela lesi senzo ukuthi sivele.
UNdlovu ubesetshenziswa kakhulu esikhundleni sakhe ukuvala abadlali abengekho futhi uqede isizini edlala imidlalo engaphansi kweyi-15 kuyo yonke imiqhudelwano.
Kodwa lowo ngumlando wasendulo. Imiklomela yakhe emibili ayithole kule sizini ubedlale neCape Town City, okokuqala kwi-MTN8 nangoLwesibili kwi-DStv Premiership.
“Noma yini eyenzeke esikhathini esedlule yenzekile. Okubalulekile ukuthi ngikhona eqenjini. Ngisebenze kanzima futhi ngihlala nginesimilo esihle. Lokho kuyakhokha manje,” kusho uNdlovu.
NgoLwesibili uNdlovu udlale umdlalo omningi elimele ekhanda ngemuva kokushayisana nozakwabo uThabang Monare. UMonare waphuthunyiswa esibhedlela ukuyohlolwa ngemuva kokuxinwa yisifo sokudideka futhi wakhishwa ngabo lobo busuku.
Ebhala ku-Twitter, uMonare uthe: “Ngiyabonga bafana ngemiyalezo yenu esuka ezinhlizweni. Ngiyaphila.”
UNdlovu noMonare kulindeleke ukuthi babambe iqhaza elikhulu ekusizeni amaBhakabhaka ukuthi alungele ukungena kwi-CAF Confederation Cup. NgeSonto iPirates ivakashele iJwaneng Galaxy yase-Botswana emdlalweni womlenze wokuqala e-Botswana National Stadium ngehora le-3 ntambama. Umlenze wokubuya uzoba seOrlando Stadium ngeSonto elizayo ngehora le-5 ntambama.
Umthombo wesithombe: @kickoffmagazine